Ankafizo ireo tolotra ireo amin'ny kojakoja ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Androany amin'ny Andro Premium an'ny Amazon, ankafizo ireo tolotra ireo amin'ny kojakoja iPhone
Ankalazaina anio Andro Premium amin'ny Amazon, amin'ny fomba rehetra ahafahan'ny mpampiasa rehetra misoratra anarana amin'ny serivisy premium an'ny orinasa afaka mankafy tolotra mahaliana anio.
Raha tsy mpampiasa premium ianao, afaka misoratra anarana eto ianao hankafizanao fe-potoana fitsapana maimaim-poana izay ahafahanao miditra amin'ny tolotra Premium Day ary hahafeno fepetra amin'ny fandefasana mandritra ny 24 ora amin'ny vokatra maro atolotra ao amin'ny magazay.
Mitandrema satria raha misoratra anarana ho mpampiasa vaovao ianao dia hampavitrika ny rafitra fanavaozana mandeha ho azy Ka raha tsy esorinao io, aorian'ny fotoam-pitsarana dia hampandoavin'i Amazon anao 19,95 euro isan-taona ny maha Premium anao. Raha te-hamono azy ianao dia hahita ny safidy hanaovana izany ao amin'ny takelaka misy anao.
Raha efa mpampiasa premium ianao dia ankafizo ireto accessories iPhone manaraka ireto miaraka amin'ny tolotra:
Volana Philips Hue: Raha te hanampy loko ny tranonao ianao izao dia afaka mahazo jiro LED azo fehezina avy amin'ny iPhone (mila ny foibe Philips ianao, raha tsy mbola manana izany) amin'ny 45 euro. Raha mila ianao mividy kitapo fanombohana(Izy io dia miaraka amin'ny hub sy takamoa telo), azonao atao ihany koa ny mahazo azy amin'ny 139,95 euro (matetika manodidina ny 200 euro ny vidiny).
Tsy misy vokatra.: ho an'ny 125 euro dia saika tsy ho vitanao ny mahita headphone tsara kokoa noho ireo. Vatana vy, feo sennheiser ary endrika maoderina. Fanomezana. Ianao koa dia manana ny Sennheiser URBANITE ho an'ny 99 euro, mitovy amin'ny XL ny feon'izy ireo saingy ny fonon'ny sofina dia kely kokoa, natao ho an'ny mpihaino vehivavy.
Parrot - MiniDrone Rolling Spider: Fa lamaody be izao ny drôna, dia azonao atao ny mahazo ny Parrot Rolling Spider amin'ny vidiny 59,90 euro fotsiny. Azonao atao ny mandray an-tanana azy amin'ny iPhone ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo drone mahatsikaiky indrindra any izy anio raha mbola ampifantohintsika hampiasaina any an-trano izy io.
8000 mAh banky herinaratra azo entina: Ankehitriny rehefa ho avy ny fahavaratra ary tsy eo an-trano intsony isika mandritra ny fotoana lava, mety mbola liana amin'ny fividianana bateria ivelany amin'ny 8000 mAh toa an'i Aukey ianao. Androany ianao dia afaka mahazo azy amin'ny vidin'ny 15,99 euro.
Tsy misy vokatra.: Manana an'ity mpandahateny ity aho ary ny tena marina dia tsara tokoa amin'ny vidiny ao anatiny. Na dia tsy marika fanta-daza aza ny TaoTronics dia mamokatra vokatra manara-penitra ary porofon'izany ny hevitry ny olon-kafa. Ho an'ny 22,99 euro dia mandray mpandahateny bluetooth ianao izay tsy misy ilana fitsiriritana ny maro amin'ny vidiny avo roa heny na avo telo heny.
OtterBox DefenderRaha mitady tranga misy ireo izay miaro ny iPhone 6 hatramin'ny farany avo lenta ianao dia azo antoka ny Otterbox Defender ary noho ny tolotra androany dia azonao atao ny mahazo 25,81 euro.
Floureon® GE6 - Case fiarovana miaraka amin'ny bateria 3200mAh ho an'ny iPhone 6: Raha mpampiasa mangataka ianao dia mety mila bateria fanampiny. Miaraka amin'ny tranga Floureon GE6 dia azonao atao ny manindry ny fizakantenan'ny iPhone 6 anao rehefa miaro azy amin'ny fikorontanana tsy ilaina. Ny tolotra anio dia misy fihenam-bidy 20% izay mamela ny vidiny amin'ny € 28.79.
Tsy misy vokatra.: bateria manohy an'io. Raha mila fiampangana fanampiny maromaro ianao, ny batterie ivelany an'i Amazon dia afaka mamoaka anao amin'ny olana mihoatra ny iray. Ny 10.000mAh sy ny seranan-tsambo USB roa dia hiantoka fa tsy ho tratry ny strand ianao. Ao anatin'ny ora vitsy ho avy dia manana fihenam-bidy 20% ianao ary mahazo $ 21.49
Bluedio - BS-2 (Explorer) Mini Wireless Bluetooth Speaker: rehefa fahavaratra isika izao dia samy te hivoaka ny trano handray ny rivotra madio. Miaraka amin'ny mpandahateny blueberry Bluedio afaka milalao ny mozika avy amin'ny fitaovantsika tsy misy tariby sy na aiza na aiza isika. Androany dia misy fihenam-bidy 51% ary mijanona amin'ny vidiny € 18.99.
Tsy misy vokatra.: Inona no tadiavintsika CarPlay? Miaraka amin'ny fidirana 3.5m sy ny mpandray Aukey dia afaka mihaino ny mozika amin'ny finday avo lenta amin'ny iPhone isika. Maimaika fa manidina izy ireo!
Tsy misy vokatra.: Raha tianao ny manao «selfie» dia azo antoka fa mahafantatra “stickie selfie” ianao. Androany Amazon koa dia manolotra ny mpanjifany premium ny iray amin'ireo klioba ireo miaraka amin'ny fihenam-bidy 53% ary mijanona amin'ny € 13.99.
Tsy misy vokatra.: Raha mijery ny hevitra ao amin'ny Amazon ianao, dia ho hitanao fa tsy ho faly kokoa ny olona amin'ny fividianana ireo finday Bluetooth ireo. Raha efa faly izy ireo dia alao sary an-tsaina hoe nanao ahoana izy ireo raha nanararaotra ny tolotra androany izay misy fihenam-bidy 33% ary mijanona amin'ny vidin'ny € 36.99.
Aogositra EP640 Wireless NFC Bluetooth Headphones: headphone bluetooth hafa, fa ireo misy famolavolana izay mampahatsiahy antsika "kely" ny Beats. Izy io koa dia headset izay falifaly amin'ny mpividy, na dia somary latsaka kely noho ny Mpow Muze aza. Manana fihenam-bidy 14% izy ireo ary vidiana amin'ny € 36,95.
Jackery Giant 12000mAh Portable Battery Charger : charger hafa mba tsy ho lany bateria ianao rehefa tsy ampoizinao. Ny charger Jockery Giant 12.000mAh dia mihoatra ny fiampangana 4 an'ny iPhone 6 Plus, izay afaka manome antsika fotoana manodidina ny 8 andro. Ao anatin'ny ora vitsivitsy dia misy fihenam-bidy 43% ary mijanona miaraka amin'ny vidiny € 39,99.
Aogositra EP634 - Headphones Bluetooth Wireless: Na iza na iza hilaza fa naheno momba ny fanombohana ny Apple Music i Amazon ary tiany izahay hihaino ny serivisy fandefasana mozika. Aogositra dia manolotra fakan-tsarimihetsika hafa tsy misy tariby miaraka amin'ny fihenam-bidy 13% mba hijanonana amin'ny vidiny 34,95.
Tsy misy vokatra.: ny rahavavin'ny batterie teo aloha. 5600 mAh ity, izay saika fiampangana iPhone 6 Plus roa. Androany ny vidiny dia milatsaka 22% ary mijanona eo amin'ny € 13,99.
Tsy misy vokatra.: raha charger fiara sy taratasy fanamarinana MFi misy vidiny ara-toekarena no tadiavinao dia mety hahaliana anao ny tolo-kevitr'i Anker. Miaraka amin'ny fihenam-bidy 47% androany, mijanona amin'ny € 15,99 ny vidiny
Fiantsenana famoahana usb Ugreen® usb misy seranana USB 10 : ary raha toa ka mila maka fitaovana hatramin'ny 10 miaraka amin'izay ny zavatra ilainao dia manolotra anay ny tobin-kaonty i Ugreen. Androany dia misy fihenam-bidy 600% ary mijanona amin'ny fananana € 79,99.
KitSound BoomBar - Rafitra Sound Bluetooth (Portable, Rechargeable, Stereo) : mpandahateny Bluetooth hafa. Ny tolo-kevitr'i KitSound dia, ho ahy, iray amin'ireo endrika tsara indrindra hitako tato ho ato. Tsy maintsy nivoaka izao ny tolotra, saingy nilatsaka izy io, ka tsy azontsika fantarina ny satan'izy ireo.
Aogositra SE30- Mpandahateny Bluetooth azo entina : mpandahateny hafa toa ilay teo aloha, fa ity kosa mora vidy kokoa na dia tsy tsara tarehy aza. Miaraka amin'ny fihenam-bidy 46% androany, mijanona amin'ny vidiny € 17,95 ianao.
Toeram-pamandrihana USB Ugreen® 30W : toby fiantsenana iray misy seranan-tsambo USB 4 ka tsy misy fitaovana ajanona intsony. Miaraka amin'ny fihenam-bidy 63% dia mijanona amin'ny € 14,99.
OtterBox Strada Raha mila tranga misy endrika kitapom-batsy ianao dia mety ho ny tranga Otterbox anao. Hita amin'ny 21:00 alina (ora peninsola Espaniola) io.
Fikorianan'ny fikomiana an-tanàn-dehibe : ary farany, mpandahateny Bluetooth hafa, ity misy charger namboarina. Ny Flow Urban Revolt Flow dia ho hita manomboka amin'ny 21:40 PM (ora peninsular Espaniola).
Hanavao ny lahatsoratra izahay rehefa misimisy kokoa ny tolotra. Aza adino fa manana fotoana fanombohana izy ireo ary mirona ho lany ny tahiry, noho izany dia mora kokoa ny mitsidika matetika ny lahatsoratra na Amazon mba hahitana vokatra vaovao miaraka amin'ny fihenam-bidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Androany amin'ny Andro Premium an'ny Amazon, ankafizo ireo tolotra ireo amin'ny kojakoja iPhone
Rodrigo de la Torre dia hoy izy:
Mamaly an'i Rodrigo de la Torre
Couria BiteSMS: tweak hanatsorana ny sms anao amin'ny iOS 8.4
Ahoana ny fomba fampidirana am-ponja ny iOS 8.1.3 - 8.4 amin'ny Mac miaraka amin'ny PP Jailbreak